Moments leh saaxiibo 11
Christian ayaa sheegay in Man uu leeyahay Body, Ruuxa iyo Ruuxa. The Theophophist ayaa sheegay in Man uu leeyahay 7-da Mabaadi. Ereyada yar ayaa ah maxay yihiin Todoba Mabaadi?
Theosophist-ka wuxuu ka arkaayaa nin labo aragti. Mid buu dhiman karaa, kan kalena dhiman maayo. Qaybta dhiman ee ninku waxay ka kooban tahay afar mabda 'oo kala duwan. Marka hore, jirka jirka, oo ka samaysan dareeraha, cabitaannada, hawada iyo dabka, kuwaas oo dhammaantood isku ah maaddada jirka. Marka labaad, linga sharira, oo ah qaab, ama naqshadeynta jirka. Jidhkani qaabkiisu waa mid ether, wax yar oo la iska baddali karo marka loo eego jirka si joogto ah u beddelaya. Naqshadeynta ama qaab dhismeedka jirka ayaa ah mabda'a sameeya qaabeeyaha cuntooyinka aan habeysan ee dareeraha, dareeraha, gaasaska iyo iftiinka jirka loo qaado, oo qaabkeeda u habeeya noloshooda oo dhan. Midda saddexaad, waa prana, ama mabda'a nolosha. Mabda 'noocan ah ee nolosha ayaa sababaysa qaabka jirka inuu ballaariyo oo uu koraan, haddii kale qaabku had iyo jeer wuxuu ahaanayaa isku mid. Mabda 'nolosha ayaa ah in cuntooyinka jirka jirku ay ku jiraan hawo joogto ah. Mabda 'nolosha ayaa duntay oo duugaysa wixii duugoobay oo qaabkeeda cusub ku beddelaya. Sidaa darteed jirkii hore waa la geeyay oo waxaa lagu beddelaa wax cusub oo jireed, oo nolosha nolosha ayaa loo dhisay jidh jidh ah, oo jidhka jidh ahaaneed ayaa la siiyaa qaab oo ay isku hayaan qaab ahaan ama qaab ahaan qaab ahaan. Tan afraad, waa kamaati, mabda'a rabitaanka. Rabitaanku waa xayawaan qallafsan oo xayawaanka ku dhex jira aadanaha. Waa dareenka dhaxalka iyo dabeecadaha xayawaanka ee ku jira aadanaha, waxayna adeegsataa oo siisaa jihada nolosha iyo qaab dhismeedka jirka. Afartaas mabda 'waxay ka kooban yihiin qayb nin ka mid ah oo dhinta, kala go'ay, kala-baxa oo ku soo noqda qodobbadii laga soo qaatay.
Qaybta aan dhiman karin ee dadku waa saddex laab: Marka hore, Manas, maanka. Maskaxdu waa mabda'a kala duwan ee qofka ka dhigaysa nin bina aadam ah. Maskaxdu waa mabda'a caqli galka ah ee ninka, taas oo lafagurisa, kalaba, isbarbar dhiga, taas oo isu aqoonsata isla markaana isu aragta inay ka duwantahay kuwa kale. Waxay ku midowdaa damac iyo inta lagu guda jiro nolosha jir ahaaneed waxay uraysaa damac inay kaligiis ahaato. Sababaha maskaxda, laakiin rabitaanka ayaa raba; dareenka damaca, sida ka soo horjeedda waxa sababay. Laga soo bilaabo xidhiidhka maskaxda iyo rabitaanka waxay ka yimaadaan dhammaan waayoaragnimadeenna nolosha. Adigoo ku xiran xiriirka maskaxda iyo rabitaanka waxaan leenahay isku xirnaanta ninka. Dhinac, damac, xanaaq, fowdo; dhanka kale, macquul, nabad jecel oo asalkiisu yahay rabbaani. Maskaxdu waa mabda'a loogaga beddelo wajiga dabeecadda; buuraha waa la jeexjeexay, kanaalyo la dhisay, dhismeyaal cirka-weyn oo kor loo qaaday iyo xoogagga dabiiciga ah ayaa la jaangooyay loona dhaqaaqay in la dhiso ilbaxnimo. Midda lixaad, buddhi, waa nafta rabbaaniga ah, waa mabda'a taas oo garta oo dareemaysa nafteeda inay ku dhex jirto kuwa kale iyo kuwa kale lafteeda. Waa mabda'a walaalnimada runta ah. Waxay nafteeda u huraysaa in dabiicadda oo dhan kor loogu qaado heer sare. Waa gaariga taas oo ay ku shaqeyso ruuxda daahirka ah. Toddoba, atma, waa ruuxa laftiisa, daahir iyo wasakh la'aan. Wax walba waa ku jiraan, waana mabaadi 'qalloocan oo mabda' gudaha iyo wax walba ku jira. Maskaxda, nafta iyo nafta, ayaa ah mabaadiida aan dhiman karin, halka jir ahaan, qaab ahaan, nolosha iyo rabitaanku ay dhintaan.
Kala qaybsanaanta Masiixiyada ee jidhka, nafta iyo ruuxdu gabi ahaanba ma cadda. Haddii jidhka loola jeedo qaab jireed, markaa sidee loogu xisaabtamayaa nolosha gooni ah, qaabka joogtada ah iyo xayawaanka ku jira ninka? Haddii naf ahaan loogu jeedo shay lumin karo ama badbaadin karo, tani waxay u baahan tahay sharraxaad ka duwan kan Masiixiyiinta. Masiixiyiintu waxay adeegsadaan nafta iyo ruux iyo si isku mid ah waxayna u muuqataa inuusan awood u lahayn inuu qeexo nafta iyo ruux ama awood uma yeelan karo inuu muujiyo farqiga u dhexeeya mid kasta. Theosophist-ka markii uu soosaaray toddobadiisa jeer waxa uu dadka siiyaa sharaxaad nin, taas oo ugu yaraan macquul ah.
Ereyada yar ayaa iigu sheegi kara wixii geeriyoodey?
Dhimashadu waa ka goynta jidhka jidhka qaab ahaan, ama qaab jidh ah. Markay geeridu ku soo dhowaato qaab jidhka ether-ka ayaa ka baxa cagaha xagga sare. Markaas maskaxda ama ishu waxay jirka uga tagtaa neefta. Neefta ka bixitaanku waxay joogsataa nolosha, waxay ka tagtaa jirka qaabkiisa, jirka qaabkiisuna wuxuu ka soo baxaa feeraha oo badanaa afka ayuu ka duulaa. Xadhiggii jidhka ku xidhnaa jidhkiisa jidhkiisu waa la xidhay, oo dhimashadiina waa dhacday. Ka dib suurtagal maahan in la soo nooleeyo jirka jir ahaaneed. Mabda'a rabitaanku wuxuu ku hayn karaa maskaxda dareenka ah addoonsiga in muddo ah, haddii maankaas inta lagu jiro nolosha uu ka fikiray damacyadeedii naftiisa, taas oo markaa ku sii jiri doonta damaca xayawaanka ilaa waqtigaas oo lagu kala saari karo naftiisa iyo iyaga, markaa waa Waxay u gudubtaa xaalada ku habboon ee nasashada ama nashaadaad oo la jaan qaada fikirradooda ugu sarreeya, madadaalo iyada oo ku dhex jirta jidhka jidhka. Halkaasna waxay ku sii jiri doontaa ilaa inta nasashadiisu ka dhammaanayso, ka dibna ay ku soo noqoto nolosha dhulka si ay uga sii wadato hawsheeda meeshii ay ka tagtay.
Inta badan caqiido bixiyeyaashu waxay ku andacoodaan in markay seegaan nafta kuwa ka baxsan ay muuqdaan oo ay la sheekeystaan ​​saaxiibo. Tafatirayaashu waxay yiraahdaan tani ma aha kiiska; in wixii la arko ayan ahayn nafta laakiin uu yahay qolof, duufaan ama jidh jecel kaas oo nafta ka jareen. Yaa sax ah?
Waxaan u aragnaa in hadalkii theosophist-ka inuu yahay midka saxda ah, maxaa yeelay qeybta ay ku wada hadli karaan koox waa uun muraayad u ah waxa ay maleegayaan xubnuhu inta ay nool yihiin oo wada hadalka noocaas ahi wuxuu quseeyaa waxyaalaha, halka qaybta rabaani ah ee ninku wuxuu ka hadli lahaa waxyaalaha ruuxiga ah.
Haddii nafta ninku xabsi ku hayo ka dib geeridiisa jidhkiisa, maxayse nafta ugu muuqan kartaa in ay u egtahay in ay tahay meel aan la seexin, maxaayadaba u qaldan tahay in la yiraahdo ma ahan muuqan oo loola jeedo kuwa fadhiya?
Suuragal ma ahan in nafta bini aadamka ay ka soo muuqato shaashadda oo ay la sheekaysato asxaabta, laakiin waa wax aan macquul aheyn in ay taasi dhacdo, maxaa yeelay "fadhiyada" ma yaqaanaan sida loo kicinayo maxbuuska ku meel gaarka ah sababtoo ah muuqaalka noocan oo kale ah waa in looga yeeraa Waxaa garanaya qof yaqaan sida, ama haddii kale rabitaanka daran ee qof nool iyo sidoo kale nafta aadanaha ee la sharraxay. Waa khalad in la yiraahdo muuqaallada waa naftii tagtay maxaa yeelay nafta bini aadamka oo aan kala sooci karin nafteeda iyo damaceeda ayaa inta badan waxay ku dhacdaa metamorphosis la mid ah midda labajibbaarada si ay u garto xaaladdeeda. In kasta oo ay xaaladdan ku jirto waa firfircoon tahay sidoo kale digaaggu. Nafta bini aadamka ee kartida u leh inay iska soocdo xayawaanku way diidi doontaa inay waxbadan la yeelato xayawaankan keenaya ciqaabtan oo kale.
Sababta oo ah dhacdo aan caadi ahayn sida muuqashada qof bini aadam ah oo fahansan oo jooga seminar ayaa ah in lala xiriiro qaar hada jooga mowduucyo gaar ah, sida, tusaale ahaan macluumaadka muhiimada ruuxiga ah ama qiimaha falsafad ahaan midka ugu walaac badan. Isgaarsiinta hay'adaha ka shaqeeya hoos imaadka cinwaanka qof ka tagay, wada sheekeysi iyo khiyaamo ku saabsan waxyaabo aan muhiim aheyn iyada oo marmarka qaarkood la isla dhexmarayo arrimaha qaar ka mid ah fadhiyada. Haddii asxaabteena baxdey ay dambi ku lahaayeen wadahadalkaas foosha xumaa intii ay noolaayeen inta ay noolyihiin nololeed, asxaab ahaan, waan u murugoon laheyn iyaga, hase yeeshe waa inaan ku qasbanahay in lagu meeleeyo magangalyo waali ah, maxaa yeelay waxay noqon laheyd ayaa u muuqday mar qudha inay maskaxdooda ka luntay. Tani waa uun wixii ku dhacay banii'aadamka ka muuqda dhinacyadu. Runtii maskaxdoodu way ka sii bexeen. Laakiin rabitaanka aan ka hadlayno ayaa sii jira, oo waa rabitaan iyada oo keliya laga muujiyo maankii ay la xidhiidhay waxa ka muuqda seeraha. Muuqaaladan ayaa ka boodbooday mowduuc ilaa mawduuc kale oo aan laheyn sabab macquul ah iyo sidoo kale wax aan macquul aheyn oo fikir ama muuqaal ah. Sida waalan, waxay u muuqdaan inay si lama filaan ah u xiiseeyaan maaddada, laakiin sida ugu dhakhsaha badan ayey u waayaan mawduuca, ama xiriirkooda ay la leeyihiin, waxayna u boodaan mid kale. Marka qofku booqdo magangalyada waalane wuxuu la kulmi doonaa xaalado gaar ah. Qaar yar ayaa si fudud ugula sheekaysan doona mowduucyo badan oo xiise leh, laakiin markii arrimaha qaar la soo bandhigo lunatic waxay noqdaan rabsho. Haddii wadahadalka la sii wado muddo dheer oo ku filan barta ay ka joogsatay inuu bini-aadamka la ogaado. Waxaa la mid ah lafdhabarta ama foomamka rabitaanka ee ka muuqda qeybaha. Waxay ka dhawaaqaan dareenka hore iyo hamiga noloshiisa iyo nolosha dhulka waxayna isu muujiyaan si waafaqsan himiladooda, laakiin inta badan waxay ku dhacaan sheekaysiga aan micnaha lahayn markii arrimaha kale la soo bandhigo oo aan ku habboonayn rabitaankooda gaarka ah. Waxay leeyihiin hal abuurka xayawaanku, sida xayawaanku, waxay ku ciyaari doonaan garoonka dhexdiisa oo ay ka gudbi doonaan oo ay ka gudbi doonaan jidkooda si ay uga baxsadaan qofka iyaga eryaya su'aalo isdaba joog ah. Haddii ugaarsiga la sii wado, bixiyaha midkood wuxuu si qaldan u weeydiiyaa su aalaha sababta oo ah 'waa waqtigiisii ​​oo waa inuu tagaa' haddii kale wuxuu oran doonaa isagu garan maayo sida looga jawaabo waxa la weydiiyay. Haddii qof bini aadam ah oo muuqda uu muuqdo wuxuu toos u noqon lahaa oona luqun lahaa hadaladiisa iyo waxa uu sheegay inay qiimo u lahaan doonaan qofka laga hadlayo. Nooca isgaadhsiintiisu waxay noqon doontaa mid anshaxeed, akhlaaqeed, ama qiimo ruux ahaaneed, ma noqon doonto arrimo la wadaago, sida had iyo jeer waa kiiska qaybaha.
Haddii muuqashooyinka kuxiga ay yihiin kaliya muraayadaha, buufinta ama doonista jidhka, kuwaas oo ay kala gooyeen nafaha dhimashada ka dib, maxay sababta ay u awoodaan inay ula xiriiraan kuwa fadhiya maadada ay yaqaanaan oo keliya qofka daneynaya, iyo sababta Miyay tahay mawduuca isla markiiba soo kordhi doona?
Haddii lafdhabarta ama foomamka rabitaanka ay ku xirnaayeen inta lagu gudajiray nolosha dhulka iyo magacyada ay sheeganayaan inay yihiin, way ka warqabaan mowduucyo gaar ah, sida kiiska nin waalan, laakiin iyagu waa automaton oo keliya, waxay ku celceliyaan mar kale si isdaba joog ah fikradaha iyo rabitaanka nolosha. Sida sawir-qaade ahaan waxay uga hadlaan wixii iyaga loogu hadlay, laakiin waxay ka duwan yihiin sawir-qaadaha waxay leeyihiin damacyada xayawaanka. Sidii ay damacoodu ugu xirnaayeen dhulka, sidaas oo ay yihiin hadda, laakiin xannibaad la'aan ayaa ku jirta joogitaanka maskaxda. Jawaabahooda waxaa soo jeedinaya iyo had iyo jeer marar badan oo ay tilmaameen su’aalaha lasiiyay, kuwaas oo ayaga loogu arkaa maskaxda su’aal weydiiyaha inkasta oo laga yaabo inuusan ka warqabin. Tusaale ahaan, qofku wuxuu arki karaa nal ka ifaya koofiyadda weelka ama shay kale oo laga yaabo inuusan ka warqabin. Markii weydiiyaha wax ogeysiiyo wax uusan horey u aqoon, wuxuu u arkaa inay tahay wax cajiib ah dabcan wuxuu moodayaa inay ku ogaan karaan oo keliya naftiisa iyo xogtiisa, halka ay tahay kaliya milicsiga lagu arkay maskaxda su'aasha ama haddii kale waa muujinta dhacdo ka dhaceysa qaabka-rabitaanka iyo muujinta muujinta mar kasta oo munaasabadda loo oggolaado.
Xaqiiqda looma diidi karo in jinniyadu mararka qaarkood u sheegaan runta sidoo kale waxay bixiyaan talo haddii la raaco waxay keenaysaa faa'iidada dhammaan dadka khuseysa. Sidee u noqon kartaa sarkaalka, ama kuwa kale ee ka soo horjeeda diimeed, ma diidaan ama sharaxaan xaqiiqooyinkaas?
Ma jiro qof cilmiga fiqi ah ama qof kale oo ixtiraama runta marna isku dayo inuu beeniyo xaqiiqda, mana quursado runta, mana isku deyi doono inuu qariyo xaqiiqda, ama inuu sharraxo. Dadaalka qof kasta oo jacayl run ah jecel waa inuu garto xaqiiqda, oo uusan qarin; laakiin jaceylka uu u qabo xaqiiqadu uma baahna inuu aqbalo sida dhabta ah sheegashooyinka qof aan macquul aheyn, ama kuwa wax faafinaya, ama qolof, ama aasaasi ah, oo u yeeriya koox asxaabteedii qaaliga aheyd. Wuxuu dhagaystaa sheegashooyinka la sameeyay, ka dib wuxuu caddeeyaa sheegashooyinka inay run yihiin ama been yihiin caddaynta horumartay. Xaqiiqadu marwalba way is muujisaa. Afkooda waxaa ka soo baxay quduusiin isugu jirta inay yihiin kuwo quduusiin ah, oo dadka falsafada u ah inay yihiin kuwa falsafada ah; Hadalka dadka aan caqliga lahayn wuxuu cadeynayaa inay yihiin kuwa aan caqli gal aheyn isla markaana isjecelku wuxuu cadeeyaa inay yihiin kuwo Faneed. Ma aaminsanahay in theosophist-ka ay ka soo horjeedaan xaqiiqooyinka Ruuxaani, in kasta oo ay diidaan sheegashada inta badan ee kuwa diinta sheegta.
Qaybta koowaad ee su'aasha ayaa ah: samee "jinniyo" mararka qaar runta u sheeg. Way sameeyaan - mararka qaarkood; laakiin sidoo kale dambiilaha ugu adag ee arrintaas ku lug leh. Maadaama aysan jirin tusaale qaas ah oo lagu sheegay "ruux", waxaan ku dadaali doonnaa inaan dhahno runta ama runtu sheegatay waxa dadka qaar ku adkaysanayaan inay ugu yeeraan "jinniyo" waa goob caadi ah. Sida, tusaale ahaan, qoraal ahaan in toddobaad gudihiis waxaad ka heli doontaa warqad ka socota Maryan, ama John, ama in Maria xanuunsan doonto, ama ladnaan doonto, ama in nasiib wanaag ku dhici doono, ama in saaxiibku dhinto, ama inuu shil dhaco. Hadday waxyaalahaas midkood run noqdaan, waxay u muuqan doontaa oo keliya in la muujiyo in unug — ha ahaato qof sare ama mid hooseeya — oo awood u leh garashada dareenka wanaagsan kana fiican kan la mid ah, haddii uu jidhku leeyahay. Tani waa sidaas maxaa yeelay jir kasta wuxuu ku ogaadaa diyaaradda ay ku shaqeyneyso. In kasta oo aad ku nooshahay jidhka jidh ahaaneed, mid wuxuu ku gartaa waxyaalaha agabka ah iyada oo loo marayo dareenka jidhka; iyo dhacdooyinka waxaa la gartaa oo keliya waqtiga ay dhacaan, sida hargab, ama ku dhac, ama helitaanka warqad, ama shil shil. Laakiin haddii qofku aanu ku xaddidnayn jidhka jidhka oo uu wali leeyahay dareenka, dareenkaasi waxa uu ku hawl galaa diyaaradda soo socota ee jidhka, taas oo ah astral. Qofkii ka shaqeeya diyaaradda astral wuxuu arki karaa dhacdooyinka ka dhacaya halkaas; aragtida ku jirta diyaaradda astral waxay ka timid dhul ka sareeya kan jirka. Markaa, tusaale ahaan, fikirka ama ujeedka wanaagsan ee mid inuu qoro warqad waxaa arki kara qof awood u leh inuu arko ujeedka ama fikirkaas, ama hargab ayaa la saadaalin karaa inuu hubaal yahay iyadoo la arko xaaladda jidhka astral ee qofka haysaa. Shilalka qaarkood ayaa sidoo kale la sii saadaalin karaa marka sababaha ku kalifay in dhaqdhaqaaq la sameeyo. Sababahani waa sida caadiga ah fikradaha ama ficillada dadka, oo markii sabab la bixiyo natiijada waa la raacayaa. Tusaale ahaan: Haddii dhagax lagu tuuro hawada mid ka mid ah wuxuu saadaalin karaa dhicitaankiisa muddo dheer kahor intuusan dhulka taaban. Marka loo eego xoogga lagu tuuray iyo fallaarta geeskeeda, jaranjarooyinka ay ka soo jeedaan iyo masaafada ay ku dhici doonto si sax ah ayaa la saadaalin karaa.
Hay'adaha ka shaqeeya diyaaradda astral-ka ayaa laga yaabaa inay sidaas u arkaan sababaha ka dib markay abuurmaan oo waxay saadaalin karaan dhacdo si sax ah maxaa yeelay waxay ku arki karaan astral-ka kaasoo ku dhici doona jirka. Laakiin gacankudhiigluhu wuxuu arki karaa jiilaalkii dhagax oo wuxuu saadaalin karaa in hoos udhaca dhab ahaantiisa yahay mid ilaaliye ama falsafad. Kuwaani waa agabyo maadi ah. Talada la siinayo sida looga fogaado shil ma cadeeyo inay ku bixisay nafta aan dhimanin. Beeraleyku waxaa laga yaabaa inuu kula taliyo mid ka mid ah shilalka soo socda sidii saxda ahayd oo kale. Midkood ayaa kaala talin kara mid taagan jidka dhagaxa soo degaya kana hortago dhaawaca. Sidaas oo kale ayaa lunatic ah. Waxaa la waydiin karaa sida talooyinka noocan ah ay u bixin karaan iyada oo loo yaqaan 'spook', haddii spook waa maskax la'aan. Waxaan dhihi karnaa waa in maskaxdu maskaxda ka go'do isla dareenka ah in nin rajo la'aan ah oo waalan uusan maskaxda ka jirin. Inkasta oo uu lumiyo aqoonsi shaqsiyadeed, hadana aragti yar ayaa jirta oo la galiyay rabitaanka, waxayna ku sii jirtaa rabitaanka. Waa tan muujineysa maskaxda maskaxda ee xaaladaha qaarkood, laakiin waa in la xasuustaa in kastoo qolofku ka waayey maskaxda in xayawaanku sii jiro. Xayawaanku luminin xeeladdiisii ​​iyo xaywaankii xayawaanku la yimid aragtida uu maanka ku hayo waxay awood u siineysaa inuu raaco, xaaladaha qaarkood, sida kuwa horeyba u jibbaarmay, dhacdooyinka ka socda boqortooyada halka ay ka shaqeyso. Xaqiiqooyinka ayaa markaa ka tarjumaya lafteeda iyada oo sawir laga yaabo inuu muujiyo muraayad. Marka dhacdo ka turjumeyso jirka rabitaanka oo sawirkan uu kuxiran yahay ama uu laxiriiro mid kamid ah fadhi fadhiyaha, shabaqa ama qolofka ayaa ka jawaabaya sawirka fikirka ee ka muuqda kuna dadaalaya inuu ku dhawaaqo fikirka ama aragtida sida digaag ahaan. codbaahiye ama jawaabi kara qofka furaha furaya. Marka loo fadhiyo koox seist ka lumay ama si khaldan wax u fahanto, lumintani waxay ku sii jirtaa sawirka maskaxdiisa sawirkanna waxa loo kaydiyaa sidii xusuus hore. Sawirka waxaa badanaa lagu arkaa ama lagu muujiyaa jirka rabitaankiisa ama dillaacay. Ka dib waxay ka jawaabtaa sawirka iyadoo loo sheego qofka fadhiyey in waqtigaas oo kale lumiyey qodobka qiimaha leh, ama in qodobkaas laga heli karo isaga, meeshii uu galiyay, ama meeshii lagu waayey. Kuwani waa tusaalayaal marka xaqiiqooyinka la sheego iyo talo bixin la bixiyo, taasoo cadeynaysa inay sax tahay. Dhanka kale, halka hal xaqiiqo laga bixiyo, boqol been beenta ayaa la sheegaa, oo halka talooyinku mar saxa yahay, waa kun jeer marin habaabin ama waxyeelo. Sidaa darteed waxaan nidhaahnaa inay tahay waqti lumis iyo dhibaato in la waydiiyo oo la raaco talooyinka kuwa baxsaday. Waa xaqiiqo la ogsoon yahay in dadka oo dhan ugaarsada daciifnimada kuwa kale, ku howlanaa sharad, ama khamaar, ama male-awaal suuqa, u oggolaadaan dhibanayaasheeda loogu talagalay inay ku guuleystaan ​​lacag yar, ama waxay ku dhibi doonaan dhibbanaha caqligiisa. qiyaasta. Tan waxaa loo sameeyaa si loogu dhiiri geliyo dhibbanaha inuu sii wado halista uu ku sugan yahay, laakiin aakhirka tani waxay ku keentaa guuldarradiisii ​​iyo burburinkiisii. Isku mid ayaa la mid ah kuwa dhexdhexaadka ah iyo kuwa bajaajleyda iyo kuwa ugaarsada ifafaale. Xaqiiqda yar ee ay ka hesho waxay ku sasabtaa inay ku sii wadaan howlahooda ilaa iyo, sida mala-awaalku, waxay aad ugu hooseeyaan inay baxaan. Foojiruhu waxay la wareegaan gacan ku haynta waxayna aakhirka ka waaban karaan dhibbanaha gebi ahaanba ka dibna waxay la soconayaan guuldarrooyinka iyo burburka. Tirakoobka dhex-dhexaadka ah iyo madax-bannaanida ifafaaleyaasha ayaa caddeyn doonta hadaladaas inay run yihiin. Oo kii ku guuleysta "jinniyiinta" ma "diidi karo kumase sharixi karo xaqiiqadan."